Accueil > Gazetin'ny nosy > Vonjy aina : Atsaharo aloha ny adilahy politika
Vonjy aina : Atsaharo aloha ny adilahy politika
Tsy misy resaka raha tsy « coronavirus » eran-tany amin’izao fotoana izao. Be loatra ny olona maty izay mahatratra
2 804 393 ary 129 015 086 ny olona mitondra ny otrik’aretina.Tarehi-marika ny zoma faha 02 aprily 2021 ireo. Ny fanjakaka Amerikanina no isan’ny voa indrindra satria dia mahatratra 545 887 no maty ary 30 095 776 ny olona marary hatramin’izay. Ny any France dia 4 695 082 ny trangan’aretina ary ny maty dia nahatratra 95 948.
Voadona mafy koa i “ Brezil sy Angleterre, Allemagne, Italie…”.
Ho antsika eto Madagasikara manokana dia 30 no maty tao anatin’ny roa andro izao ny alakamisy sy ny alarobia lasa teo. Mahatratra
24 968 ny olona mitondra ny otrik’aretina hatramin’izay ary 444 ny isan’ny maty .
Tsy mitsaha-mitombo andro aman’alina ny fitomboan’ny olona voan’ny valan’aretina “covid-19” ity hatramin’izao. Mihorohoro izay tsy izy ny vahoaka. Tsy fantatra izay havoakan’ny ampitso. Tsy misy fotoana hieritreretana zavatra hafa raha tsy ny vonjy aina sy ny tsy ho faty amin’ izao fotoana izao. Tsy mifidy saranga na sokajin’olona izany fa samy matahotra avokoa.
Eo anatrehan’izany dia tsy ilaina intsony ny fanaovana politika politisianina. Na hoan’ny mpanohitra izany fa indrindra hoan’ny mpitondra firenena. Ny fotoana toa izao indrindra no tokony hisian’ny tena fitiavan-tanindrazana. Tsy ilaina intsony ny ady lahy politika fahita matetika eto Madagasikara hatramin’izay ka tsy hisy afa tsy ny fanakianana sy ny tsikera no ifanaovan’ny roa tonta.
Aoka koa nefa ny mpitondra fanjakana ka tena hijery ny tombotsoan’ny vahoaka ary hahay hiaro ny ainy. Potika avokoa ny fihariana rehetra eto Madagasikara. Ny tantatsa mpamokatra tsy afaka niasa ny taniny noho ny hain-tany. Ny asan-jiolahy sy ny dahalo manomboka mirongatra indray. Ny mpitatitra be dia be no maty antoka noho ny fepetra ara-pahasalaman tsy maintsy arahina noho izany dia vitsy ny olona mivezivezy. Ny orinasa lehibe sy salasalany samy tsy mandeha. Misy mihitsy aza no mikatona noho ny fatiantoka.
Tsy zakan’ny firenena sy ny vahoaka intsony raha izao no mbola misy krizy politika. Ny olona mitarika izany dia azo lazaina fa fahavalom-bahoaka.
Ny fotoana toa izao indrindra no tokony hiainana ao anatin’ny fifampifehezana sy ny fifanajana ary ny fanarahana lalàna. Izao zavatra iainana eto amin’ny firenena izao no tokony hisian’ny firaisankina sy ny fiombonam-po. Aoka hijanona aloha ny politika politisianina raha toa ka tena hiady amin’ity “covid-19” ity isika Malagasy.